Liyuu booliska oo markii ugu horreysay lagu wareejiyay amniga ceelasha shidaalka | Xaysimo
Home War Liyuu booliska oo markii ugu horreysay lagu wareejiyay amniga ceelasha shidaalka
“Haddaba anaga oo nidaamka ilaalada ee ciidanka deegaanka kalsooni aad uwayn kuqabna, hadana Waxaan ku boorinaynaa inay hantidooda ilaashadaan, xil aad uwayna iska saaraan adkaynta amniga ee ceelasha shidaalka” ayuu yiri Cabdinuur Faarax.h
Ciidamada deegaanka Somaalida ayaa haatan si buuxda ula wareegay ceelasha shidaalka ee Jeexdin iyo Ellele.
Taliyaha ciidamada Liyuu Booliska ayaa soo kormeeyay ceelashada shidaalka ee deegaanka iyo sidii xiriir wanaagsan loola yeelan lahaa shirkadaha ku howlan shidaal baarista.
Bishii Juun ee 2018 ayay ahayd markii dowladda Itoobiya ay markii ugu horreysay xarigga ka jartay wax soo saarka ceelal laga qodo Shidaalka ceyriin oo ku yaalla deegaanka Soomaalida.
Warbaahinta dowladda Itoobiya ee lagu magacaabo Fana oo xilliggaas soo xigatay Rai’sul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed in shacabka dalkiisa uu uga hambalyaynayo islamarkana maalintii la soo saari doono 450 barmiil oo shidaal ah.
Khuburada ayaa sheegaya in khayraadkan dabiiciga ah haddii si xaq ah oo wanaagsan loo isticmaalo uu gacan ka gaysan doono in lacagta Itoobiya uu qiimaheedu sare u kaco islamarkana uu dhaqaalaha dalkaasi si xawli ah u kobco.
Balse gobolka ayaa imika la sheegay in uu ammaankiisu wanaagsa yahay.